Fihaonambe 2008 miresaka SIDA · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Jolay 2019 8:07 GMT
Tontosaina any Mexico City manomboka ny 3 hatramin'ny 8 aogositra 2008 ny Fihaonambe Iraisam-pirenena faha-17. Fanao isaky ny roa taona any amin'ny tanàna samihafa ny hetsika, izay fivoriana iraisam-pirenena lehibe indrindra momba ny olana ara-pahasalamana manerantany. Sambany tontosaina ao Amerika Latina izany.
Ny valandresaka tamin'ity taona ity dia nahitàna mpandray anjara 22 000 teo ho eo avy amin’ izao tontolo izao, anisan'izany ireo mpahay siansa, ny mpanao politika, ny mpikatroka, ary ny mpisolovava (jereo Juliana, Lova, sy Collins)
Haseho mandritra ny fihaonambe ny fikarohana siantifika vaovao, ary hizara lesona nianarana sy hifanakalo hevitra momba ny hoavy sy ny fisorohana ny VIH/SIDA ireo mpandray anjara. Ny lohahevitry ny hetsika amin'ity taona ity dia, “Universal Action Now,” izay manasongadina ny filàna maika hiadiana amin'ny VIH / SIDA.
11 Aogositra – African MSM & Sex Workers Voice Concerns and Hopes at AIDS 2008 (African MSM & mpivaro-tena maneho ny ahiahiny sy ny fanantenany tamin'ny SIDA 2008)
28 Jolay – AIDS: XVII International Conference call for videos (Antso hanao lahatsary amin'ny fihaonambe iraisam-pirenena faha-XVII momba ny SIDA)
Kaisernetwork.org: Fitantarana antsipirihany avy any Mexico City, anisan'izany ny Webcasts, tafatafa sy fandalinana isan'andro.
aids2008.com: Bilaogy, lahatsary, sary sy hafa avy amin'ny fihaonambe iraisam-pirenena momba ny SIDA.
Witness’ THE HUB: Fitantarana ny fihaonambe mampiseho lahatsary, sary sy lahatsoratra bilaogy momba ny VIH/SIDA.
Phrfightsaids.org: Tranonkala sy bilaogy momba ny fihaonambe avy amin'ireo dokotera ho an'ny zon'olombelona.
SciDev.Net's Bilaogy fitantarana ny fihaonambe.
faith&AIDS Bilaogy ahitana lahatsoratra momba ny fihaonambe.
AIDS 2008 Photo Library: Sary nandritra ny hetsika.